နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသို့ အီတလီနိုင်ငံ AICS အဖွဲ့မှ IT ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနား – FERD
နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသို့ အီတလီနိုင်ငံ AICS အဖွဲ့မှ IT ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနား
နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသို့ အီတလီနိုင်ငံ AICS အဖွဲ့မှ IT…
နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသို့ အီတလီနိုင်ငံ AICS အဖွဲ့မှ IT ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်သည်။
အခမ်းအနားသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်း အတွင်းဝန် ဦးအောင်နိုင်ဦး၊ အီတလီနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Alessandra Schiavo၊ အီတလီနိုင်ငံ AICS အဖွဲ့မှ Ms. Anna Dal Maso၊ KMD နှင့် NetSmart ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံများ၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန် ရှိသူများတက်ရောက်ကြသည်။
အခမ်းအနားတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်း အတွင်းဝန် ဦးအောင်နိုင်ဦးနှင့် အီတလီနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Alessandra Schiavo က အမှာစကား အသီးသီးပြောကြားခဲ့ပြီး အီတလီနိုင်ငံ AICS အဖွဲ့မှ Ms. Anna Dal Maso က လှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
ထို့နောက်တွင် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက အီတလီနိုင်ငံ AICS အဖွဲ့သို့ ကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားပြီး IT ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်း ပေးခြင်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို AICS အဖွဲ့၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဦးစီး ဌာနနှင့် KMD တို့မှ တာဝန်ရှိသူများက လက်မှတ်ရေးထိုးလဲလှယ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၃၀ ရက် နေပြည်တော်
Category: သတင်း မေ 2, 2019
PreviousPrevious post:နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဉီးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ စီးပွားရေးသံမှူးတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးNextNext post:ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်နှင့် ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ ၊ Presidential Committee on New Southern Policy ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ဒီဇင်ဘာ 24, 2020
ဒီဇင်ဘာ 23, 2020